Seera qubee qacalee reefuu hojii irra oole san gabbisee irroomsee afaan jabaa taasisuuf kan danda’u abbuma qubee sanii ture. Abbaan qubee sun ammoo dhimma wal diddaa siyasaa irraa dhiibamee biyya gadhiise. Qubeen qacaleen reefuu dhalatte abbaa malee yatiima (orphan) taatee hafte. Hanga tokkoofuu garuu, beektonni Oromoo gaafas sirna barreeffama qubee kana ABO jalatti baratan, biyya keessa jiraachuutu qubee du’a irraa baraaree aduu har’aa kana qaammachiise. Warri gaafas baratoo, booda barsiisaa tahanii qubee daa’ima kichuu tan warri irraa godaane abbaa fi haadha tahaniifii guddisan.Rakkoon kun waan irraa ka’ee dhalate qaba. Irra hedduutti sirni barreeffama qubee Afaan Oromoo biyya alaa keessatti hojii irra oolaa jiru, sirna barreeffama ABOn waggoota dheeraaf dagaagsee fi barsiisaa yoona gahee dha. Sirna qubee Afaan Oromoo kan yeroo duraaf labsee fi barsiisuus eegale dhaabuma ABO tahuu isaa itti walii galla. Haa tahuutii ABOn akkuma bara 1992tti mootummaa cehumsaa hoggasii gadhiisee baheen, barsiifni qubee isaas akka hawwametti bifa wal fakkaataadhaan (uniformally) biyya keessaa fi alatti dagaaguu hin dandeenye. Hoggas tarkaanfiin Afaan Oromoo afaan barreeffamaa taasisuuf fudhatame injifannoo guddaa tahuyyuu, yeroo fi carraa bal’aa argatanii calaatti irratti hojjechuuf hireen hin turre.
Afaanuma tokko tahee garaagarummaan sirna barreeffamaa kana fakkaatu yoo dhalatu nama yaaddessuu qaba. Garaagarummaa akka fakkeenyaatti ka’e kana irratti kamtu sirrii dha kamtu dogoggora kan jedhu laalchisee qorannoon taasifamu homaa hin mul’atu. Tarii namoonni mataa gad qabataniituma matayyaadhaan qorachaa jiran jiraachuu ni malu. Haa tahu malee qorannoon afaan ummata bal’aa akkasii kanaaf barbaachisu matayyaan osoo hin taane walitti dhufuun geggeessuutu bu’aa gaarii qabaata. Waan walitti dhufamee hojjetamu akkasii kanatu rakkoo dhalataa jiru kana hambisa waan taheef. Qorannoon mata mataatti geggeeffamu walitti sassaabamee waltajjii hayyoota hirmaachisu irratti mariif hin dhihaatu taanaan daranuu rakkoo hammeessa.Biyya keessatti, ‘Oromiyaan dhiigailmaansheetiin nibilisoomti!’ yoo jedhamu, alatti garuu ‘Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin nibilisoomti!’ jechuun barreeffama. Kunniin fakkeenyumaaf dhihaatan malee, garaagarummaaleen kana caalan hedduutu jiru.
*Kitaaba hin maxxanfamin HARKATU HARKA DHIQA keessaa kan fudhatame.